Laboratoara manara-penitra iPOCT-News-Sinocare
Laboratoara fanamarinana iPOCT
Fotoana: 2021-02-22 Hits: 152
Ny foto-kevitry ny laboratoara manara-penitra iPOCT dia ny manome programa laboratoara manara-penitra miaraka amin'ny tokonam-baravarana ambany kokoa ho an'ireo toeram-pitsaboana voalohany amin'ny alàlan'ny valin'ny fikarohana haingana kokoa, ny takiana amin'ny habakabaka kely kokoa ary ny fanampian'ny rafitra manan-tsaina kokoa. "Miorina amin'ny teknolojia vaovao, azonao atao ny manamboatra laboratoara fanamarinana iPOCT amin'ny habaka latabatra ihany."
Na dia kely kokoa aza ny habaka dia manarona ny biokimia iCARE-2100, ny koagulasi ary ny fitaovana fanaraha-maso birao kely hafa sy ny rafitra laboratoara manan-tsaina. Ny fitsapana dia misy proteinina C-reactive, proteinina C-reactive avo lenta, amyloid A, fahazaran-drà ary zavatra hafa mamaivay, glucose amin'ny ra, asidra urika ao anaty ra, lipida-dra, hemôglôbininà glycosylated, micro-albumin urin ary mari-pamantarana hafa mifandraika amin'ny aretina mitaiza, toy ny ary koa ny mari-pamantarana biokimika mahazatra, ny aretim-panafody ary ny aretin-kozatra vokatry ny aretina, sns. Manarona aretina isan-karazany toy ny diabeta, mamontsina ny taovam-pisefoana, aretim-po, gout, ary nephritis izay voamarina matetika, voatsabo ary tantanana, manome porofo marina kokoa ireo mpitsabo amin'ny ankapobeny. porofo mifototra ary mamaha ny fahaizan'ny diagnostika amin'ny aretina maro kokoa.
Ho fanampin'izany, amin'ny alàlan'ny fifandraisana tsy misy fangarony amin'ny rafitra HIS, ny tatitra momba ny fitsapana ny laboratoara dia azo ampitaina mivantana any amin'ny HER dokotera, ary nosokafana ny rindrina fampahalalana ho an'ny fifandraisana amin'ny dokotera, ka mampihena ny fahasahiranan'ny fitantanana ny fizotran'ny klinika. Ny fitantanana mitambatra ao anatiny sy ivelan'ny hopitaly, toy ny fandikana ny vaovao momba ny valiny tena izy sy ny fangatahana kaonty rahona momba ny valiny ara-tantara, dia manatsara ny traikefa ara-pahasalaman'ny marary. "Ny tsara no tsara indrindra."
Hatramin'ny nananganana azy tamin'ny taona 2002, ny Sinocare dia nivoatra avy amin'ny metatra glucose glucose tokana ary nitazona ny tsipika vokatra feno mandrakotra ny glucose amin'ny ra, ny lipida-dra, ny hemôglôbininà glycosylated, ny asidra urika ary ireo famantarana diabeta hafa. Mifantoka amin'ny sehatry ny matihanina, Sincoare dia hanohy hanavao sy hanitatra mavitrika ny asa fitiliana POCT mba hanomezana "tranga tsy voafetra" bebe kokoa ho an'ireo marary manana aretina mitaiza sy matihanina amin'ny fitsaboana sy fahasalamana.
Pejy mialoha: Kitapo fitsapana antigen an'ny SARS-Cov-2 & Kit fanandramana Antibody tsy miandany no ekena haondrana
Pejy manaraka: Ny lanonana mamaky ny tetikasa Sinocare iPOCT Industrial Park